I-Galaxy Fold vs Huawei Mate X | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Huawei, Samsung
Umdyarho uqalile. Kwiveki ephelileyo, sibonile abona bavelisi babini babalulekileyo kwimeko yangoku, I-Huawei kunye ne-Samsung bachaze ukuzibophelela kwabo ekusongeleni ii-smartphones, ezinye izixhobo ezithi njengoko zisihla ngexabiso, ngaphezulu kunokwenzeka ukuba ziya kuba yinto eqhelekileyo phakathi kwabasebenzisi.
Zombini ii-Samsung kunye neHuawei ziye zaba nazo amanqaku ahlukeneyo okujonga ukuba i-smartphone esongwayo ijongeka kanjani okanye inokuba yintoni. Okwangoku, ekuphela kwento efana nazo zombini iiterminali kukuba ziyagoba. Kancinci. Nanku umahluko ophambili, ngaphaya kwe-aesthetics esiyifumana kwifayile ye- Galaxy Fold Samsung kunye IHuawei Mate X.
1 Ukuthelekiswa kweenkcukacha
4 Yeyiphi engcono?
5 Ngaba ukusonga ii-smartphones kunexesha elizayo?
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 ene-EMUI 9 I-Android 9 Pie ene-UI enye
Isikrini 8 intshi enesisombululo sama-pixels angama-3120 x 1440 (6.39 intshi esongiweyo kunye no-6.6 intshi ngaphambili asongwe) I-4.6 intshi HD + Super AMOLED (21: 9) isibonisi sangaphakathi kunye ne-7.3-intshi ye-QXGA + yeDynamic AMOLED (4.2: 3) infinity Flex bonisa
Inkqubo I-Kirin 980 ene-Balong 5000 njengemodem I-Exynos 9820 / i-Snapdragon 855
GPU I-ARM Mali-G76 MP10 -
i-ram 8 GB 12 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi 512 GB I-512 GB ye-UFS 3.0
Ikhamera esemva I-40 MP ye-angle ebanzi + ye-16 MP ye-angle ebanzi ye-ultra + ye-8 MP yefowuni I-16 MP f / 2.2 ye-angle ebanzi ye-12 MP Dual Pixel ububanzi-engile eneferture f / 1.5-f / 2.4 kunye ne-optical image stabilizer + 12 MP telephoto lens ene-magnification zoom zoom kunye ne-f / 2.2 ukuvula
Ikhamera yangaphambili Akukho khamera yangaphambili ukuba siyisebenzisa kwimowudi yethebhulethi Ilungu le-MP eli-10 f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 isivamvo sobunzulu kunye ne-10 MP f / 2.2 kwiphepha elingaphandle.
Conectividad I-5G Dual Sim iBluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac i-USB-C I-Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS Wifi 802.11 ac USB-C 3.1
Ezinye izinto Inzwa ye-NFC yeminwe yeminwe ecaleni Icala lekhampasi yokufunda iminwe yegyroscope NFC
Ibhetri I-4.500 mAh ene-55W yeHuawei SuperCharge 4.380 mah
Ubukhulu Ubukhulu be-11mm isongwe (5.49mm ityhilwe) -
U bunzima - I-200 gram
Ixabiso I-euro ezingama-2299 ($ 2.600) IRandi ye1980
Ukubheja kwe-Samsung kwimbono ye-smartphone ene Isikrini sangaphandle esingu-4,6-intshi ukuze sithathe nayiphi na ifowuni, khawuleza ukhangele okanye uthathe isithombe. Ukuba sifuna ukusebenzisa umxholo, okanye senze umsebenzi ongaphezulu kwesinye ngaxeshanye, singasivula isixhobo kwaye sisebenzise amathuba esiwanikwa yiGold Fold.
Ngexesha lokwenziwa kweSamsung Fold, inkampani yaseKorea inike ingxelo nganye nganye yezibonelelo eziza kusinika i-smartphone yayo yokuqala xa isiza kwintengiso ngo-Epreli walo nyaka, ukuze sibe nakho ukufumana umbono wokuba yintoni Nguwe abaqalayo ukwenziwa ngayo: I-12 GB ye-RAM, i-512 GB yokugcina, i-Snapdragon 855 / i-Eynos 9820, iikhamera ezi-6… Iinkcukacha eziya kuvumela isixhobo ukuba sihambe ngokukhululekileyo.
Kwakhona, Enkosi kwintsebenziswano ngqo evela kuGoogle Kuphuhliso lwezi zixhobo, umaleko wokwenza ngokwezifiso i-Galaxy Fold isebenza ngokugqibeleleyo njengoko sinokubona kwinkcazo eyenziwe yinkampani.
Ixabiso leGolden Fold yi- $ 1.980. Okwangoku, kufuneka silinde ukubona ukuba loluphi uguquko olonwabisayo kwi-euro.
Inkampani yaseAsia isinika i-smartphone esonga ngaphandle, ngenxa yoko asinakufumana nasiphi na esinye isikrini ngaphandle kwesayizi encinci esinokuyisebenzisa ukwenza iifowuni ngokukhawuleza okanye imibuzo. Olona ncedo luphambili olusinikwa yile fomathi kukuba sinako dYonwabela isikrini esineeyintshi ezingaphezu kwesithandathu, Iscreen esikhulu ngokwaneleyo ukuba asenzi ngqondo ininzi ukuyityhila ukuze idle umxholo kwiscreen esikhudlwana.
Inkampani yaseAsia iHuawei ikhethe ukunika iqela elifanayo leekhamera ngasemva / ngaphambili kwesixhobo. Oko kukuthi, ziikhamera ezifanayo nokuba i-smartphone isongelwe okanye ayatyhileka. Ngale ndlela, ukuba sifuna ukwenza umnxeba wevidiyo, kuya kufuneka siyenze ngefowuni esongiweyo. Ukuba sifuna ukuthatha umfanekiso, kuya kufuneka sijike i-terminal kwaye sisebenzise umva kwesikrini.
Ixabiso leHuawei X yi- $ 2.600, Ii-euro ezingama-2.299 kutshintsho (ixabiso elisemthethweni). Ngelixa i-Samsung ibizama ukubonelela ngomhla wokuphehlelelwa kwintengiso, uHuawei wathi iyakwenza njalo kulo nyaka, ngaphandle kokuchaza ukuba leliphi ixesha lonyaka, okuthetha ukuba kuya kubakho uhlengahlengiso endleleni.
Ngale ndlela, zombini ziziphelo ezihle kakhulu. Zombini zisinika iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo. Ngelixa iHuawei X inomtsalane ngakumbi Ngokusinika iscreen esinye esikhulu ngaphandle kwenotshi enokusongelwa ngaphandle, iSamsung ikhusela ingaphakathi lesikrini, idibanisa isikrini sangaphandle ukuze sikwazi ukusebenzisana ngokukhawuleza kunye ne-smartphone.
Ukusebenza kweSamsung kuyasivumela Sebenzisa i-smartphone ngendlela esongiweyo ukuthatha imifanekiso, into ethi ngeHuawei Mate X inyanzelise ukuba siyiguqule ngalo lonke ixesha, umngcipheko okoko ekugqibeleni singatyibilika size siphele emhlabeni. Ukuba sithetha ngeefowuni zevidiyo, oku kusebenza kunokwenziwa kuphela ukuba sineHuawei Mate X esongiweyo, ngenxa yokuma kweekhamera, into esinokuyenza ngokugqibeleleyo ngeGold Fold.
Ngaba ukusonga ii-smartphones kunexesha elizayo?
Ewe nohayi. Ukuba unayo ithebhulethi, eyona nto inokwenzeka kukuba ukuba awulindelanga i-WhatsApp imini yonke, uza kuba njalo kwikhaya lakho sebenzisa ithebhulethiNokuba uphendle i-Intanethi, udle umxholo, phendula ii-imeyile zakho, jonga uthungelwano lwasentlalweni ...
Ukusonga ii-smartphones kungoku nje kunendawo yazo kwintengiso kwaye ayisiyomsebenzisi oqhele ukusebenzisa ifowuni ukuthumela okanye ukufumana imiyalezo, ukwenza uphendlo njalo njalo. Abasebenzisi abanyanzelwa ukuba bahambe imini yonke kunye nethebhulethi okanye ilaptop ukusuka apha ukuya phaya kwimeko apho banesidingo sokuyisebenzisa, zezona zinokufumana okuninzi kolu hlobo lwesixhobonjengoko banikezela konke-in-nye.
Enkosi kwezi ntlobo zezixhobo, akukho sidingo sokuhlawulisa yonke imihla ngecwecwe, kwimeko apho unesidingo sokuyisebenzisa, esinika ubuchule obukhulu kunye nentuthuzelo yemihla ngemihla. Zombini i-Samsung kunye neHuawei ziveze iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo zefomathi enye, njengoko kwenzekayo kwiminyaka eyadlulayo ngeVHS kunye neBeta. Mnye kuphela kubo oya kuba uya kuthatha ikati ayise emanzini kwaye uya kuphumelela ukuba ngumzekelo oza kulandelwa ngabo bonke abanye abavelisi.
Okwangoku, kusekutsha kakhulu ukuba ungazi ukuba lo mkhwa uza kuba yintoni, kuba akukho nanye kwezi ndawo ifikelele kwiimarike, nangona zizakwenza oko kungekudala. Yonke into iya kuxhomekeka kwinto ekhangelwa ngumsebenzisi kwaye yeyiphi eyona nto intle kakhulu kuye. Kwimeko endikhankanyileyo njengomzekelo, phakathi kwefomathi ye-VHS kunye neBeta, le yokugqibela yanikela ngomgangatho ophezulu wevidiyo, kodwa ekugqibeleni yayiyifomathi yeVHS eyahlala yaza yaba yinkosi yamakhaya.
Kusesekuseni kakhulu ukusonga ii-smartphones ukuba zibe sisixhobo esiqhelekileyo sokusetyenziswa ngabasebenzisi, ukuba ekugqibeleni bayakwenza oko, ikakhulu ngenxa yexabiso, ngaphezulu kwe-2.000 yeedola kuzo zombini ezi meko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Galaxy Fold vs Huawei Mate X: iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo zenjongo enye